कोरोनाले नि धन भएको भनिएका ब्यक्तिको आँखा छैन, घाँटीमा पनि गहिरो चोट ! अस्पतालमा हंगामा (भिडियो हेर्नुस्) – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/कोरोनाले नि धन भएको भनिएका ब्यक्तिको आँखा छैन, घाँटीमा पनि गहिरो चोट ! अस्पतालमा हंगामा (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौ । केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा थप एक कै दीको कोरोनाबाट निधन भएको छ । असोज ३ गते निधन भएका रुपन्देहीका ६३ वर्षीय पुरुषमा सोमबार साँझ कोरोना पुष्टि भएको कारागार प्रमुख जेलर लक्ष्मीप्रसाद बाँस्कोटाले बताए। उनको गत शनिबार वीर अस्पतालमा उपचारको क्रममा ज्या`न गएको थियो। नि धन पछि गरिएको परी`क्षणमा उनमा कोरोना देखिएको हो।
कर्तव्य ज्यान मु द्दामा जन्म कै दको जे ल सजाय का टि रहेका उनी मिर्गौला रोगी समेत रहेको बताइएको छ । उनलाई स्वासप्र स्वासमा समस्या देखिए पछि शनिबार वीर अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। त्यही दिन उनको नि`धन भएको थियो।
उनका आफन्तले भने कोरोना र बिमारी नभइ अन्य कारणले नै ज्या`न गएको गुनासो गरिरहेका छन्। कोरोना पुष्टि भएको भन्दै आफुहरुलाई शव नदेखाइएको भन्दै आफन्तले अस्पतालमै विरोध गरेका छन् । एक जना महिला आफन्तले आफु विरामी हो भनेर शवको कपडा खोलेर हेर्दा शवको दुईवटै आँखा नभएको र अनुहार र घाँटीमा गहिरो चोट देखेको बताएकी छन् ।
आफन्तहरुले शवको पोष्ट मार्टम गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । कोरोनाको नाम दिएर उनको कसैले ज्या`न लिएको आफन्तको गुनासो छ । आफन्तसँग छलफल भइरहेको जेलर बाँस्कोटाले बताए। केन्द्रीय कारागारमा हालसम्म ६ जना कोरोना संक्र`मितको ज्या`न गएको छ ।